Ny bilaogiko dia tsara kokoa noho ny 99.86% amin'ireo bilaogy hafa rehetra! | Martech Zone
Ny bilaogiko dia tsara kokoa noho ny 99.86% amin'ireo bilaogy hafa rehetra!
Alahady, Septambra 3, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mamaky tsara aho lahatsoratra avy amin'ny mpiara-miasa bilaogy vaovao androany ao amin'ny Blog Burnout. Nahatonga ahy hanontany tena hoe aiza no ahatongavan'ity zavatra mitoraka bilaogy ity amiko. Tsy hoe mieritreritra ny hampitsahatra ny bilaogiko aho, tsy misy izany! Tiako loatra (ary ny tiako holazaina loatra!). Mampalahelo fa mety ho tsara aho na tsia - miankina amin'ny fahitanao azy. Ka tsy afaka miala amin'ny asako anio fotsiny aho (ary tsy tena te-hanao an'izany koa).
Technorati dia mitana ny laharana faha-74,061 ao amin'ny bilaogiko. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, heveriko fa ny fanontaniana dia ny hoe ahoana no tsara dia ampy? Tena misalasala aho fa misy olona ao an-tsainy tomady nijery Technorati ary nanontany tena… Manontany tena aho hoe iza amin'ireo ao amin'ny 75,000 ambony?
Manana rohy 67 avy amin'ny bilaogy 37 aho. Noho izany, ao anatin'ny tontolo misy bilaogy 52,900,000 37, mpitoraka bilaogy XNUMX no nahita ny fampahalalana ho zava-dehibe tokony hampifandraisina amiko! Saika mahakivy izany!
Ao amin'ny Influence and Automation no mitana ny laharana 74,061 amin'ny bilaogy 52,900,000 XNUMX!
Etsy ankilany, 200 fotsiny ny lahatsoratro tao amin'ny bilaogiko. Seth Godin vao nahatratra lahatsoratra 1,000 fotsiny. Angamba misy ny fahafaha-manao aorian'ny 800 lahatsoratra hafa ahafahako mitondra ny tenako ao amin'ny Top 100 an'i Technorati (Azo antoka… ary efa namoaka boky 5 koa aho tamin'izay!)
Mety ho ratsy daholo izany rehetra izany, saingy tsia. Andao asio fihodinana hafa eo amboniny. Ao anatin'ny tontolo misy bilaogy 52,900,000 74,061, ny laharana 0.14 dia tsy dia ratsy loatra! Heck, izany dia ao amin'ny XNUMX% voalohany amin'ireo bilaogy rehetra.
Ka eo ianao no manana azy. Ny bilaogiko dia tsara kokoa noho ny 99.86% amin'ireo bilaogy hafa rehetra! 😛
Mijanona amin'ny lohahevitra ao amin'ny bilaoginao? Ampiasao ny cloud tag anao hahitanao
Indraindray mampihomehy ny tenako aho!
Sep 3, 2006 ao amin'ny 5: PM PM
… Ataovy izay rohy 68: o)
Sarotra foana ny mamaritra ny fahombiazana. Sarimihetsika tsara kokoa ve ny "Jurassic Park" noho ny, hoy "Syriana"?
Sep 3, 2006 ao amin'ny 7: PM PM
Ny antsasaky ny ady amin'ny laharana bilaogy dia ny tambajotram-pifandraisana ary mahita ny akany, ary raha vantany vao azonao ireo zavatra roa ireo dia manomboka mihazakazaka ho anao ny raharaha, indrindra ao amin'ny Technorati.
Manandrana mamaky ny klioban'ny Technorati 50K ny tenako.
Sep 5, 2006 ao amin'ny 12: PM PM
Laharana tsara nahatongavanao tany, izaho dia eo amin'ny 90, xxx ny tenako, tsy ratsy ho an'ny bilaogy vaovao raha miteny izany aho 🙂
Marefy ny fahombiazan'ny bilaogin'ny mpamaky, sy ny hevitr'izy ireo. Ireo mpamaky mahafinaritra toa an'i Yvonne, Rico ary ny hafa dia manamboatra bilaogy ho toerana mahafinaritra ary manome azy toerana mahafinaritra. Mibilaogy aho satria te-hanao izany, ny laharana technorai dia fanampiny tsara fotsiny.
1 Mey 2007 tamin'ny 1:10 hariva
Voalaza tsara izany. Ankafizo hatrany ny fomba fijerinao lalina. Tohizo ny asa tsara!